Xiriirka kubadda Gacanta Soomaliya oo ka qeyb galay Shirwaynaha Xiriirka kubadad Gacanta Carabta+Sawirro – Gool FM
Xiriirka kubadda Gacanta Soomaliya oo ka qeyb galay Shirwaynaha Xiriirka kubadad Gacanta Carabta+Sawirro
jilacow December 31, 2017
(Muqdisho) 31 Dis 2017.Xoghayaha Xiriirka Soomaaliyeed Kubadda Gacanta ayaa wuxuu ka qeyb galay Shirweynihii Kubadda Gacanta waddamada Carabta oo lagu qabtey 29kii ilaa 30kii December Magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Furitaanka shirka uu goob joog ka ahaa Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Gacanta Caalamaka IHF Dr Hassan Mustafa , isagoo halkaa ka jeediyey qudbad dardaaran iyo dhiiri gelin iyo ammaanba lahayd, wuxuna ku booriyey iney waddamada carabta laba laabaan dadaalkooda ku saabsan kubadda gacanta wuxuuna ku soo dhoweeyey dalkiisa hooyo dhammaan mas’uuliyiintii ka soo qeyb gashay shirka.
Nur Maye Osman wuxuu ka warbixiyey in laga dhegeystey warbixintii waxqabad ee Xoghayaha Xiriirka Kubadda Gacanta Dr MOHAMED Muniic. kadib markii uu dhameeyey warbixintiii waxaa la guda galay doorashada guddoomiyaha Xiriirka Kubadda gacanta oo uu u sharxnaaa Gudddoomiyaha Xiriirka Kubadda Gacanta Sacuudiga Mr Mohamed Muniic oo si aqlabiyad ah ku guuleystey doorashada xilka guddoomiyenimo.
Xoghayuhu wuxuu intaa raaciyey in Guddoomiye ku xigeenka 1aad loo doortey Guddoomiyaha Xiriirka Masar Dr Hisham Nasri, halka Saciid Sharxi Oman ka socda, Cadli Alxanafi oo Marocc ah iyo Taysiir Almansii oo u dhashay Urdun loo wada doortey ku-xigeenno Guddoomiye, halka Xoghayaha Xiriirka uu noqday Khalid Rashid oo Sacuudi ah.
Nur Maye intii uu shirka joogay wuxuu kullamo la qaatey mas’uuliyiin uu ka mid ahaa Dr Hassan Mustafa IHF President oo eey isla garanteen in IHF eey Somalia si shuruud la’aan ah eey u soo diraan qubaro casharo ka bixiya wax kasta aan IHF iga baahanno.
Sidoo kale waxaa guddi loo saarey waddamada soo koraya oo ka kooban Mauritania, Yemen, Somalia, Djibouti iyo Sudan inay ka soo talo bixiyeen habka ugu habboon ee loo hormarin karo Xiriirada waddamadaas, waxaana leysku raacay in wixii baahiyaad eey soo gudbiyaan dhammaan Xiriirada ay khuseyso.
W/D: Xuseen Maxamed Hadafow
EPL: Ederson oo guul daro ka badbaadiyay Man City xili De Bruyne bareelo looga qaaday garoonka +SAWIRRO
Shirkii sanadlaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo qabsoomay iyo qodobo muhiim ah oo ka soo baxay+SAWIRRO